Artiist Iteenesh Girmaa: "Kansarii harmaan dhibamtee yaalamaa turte" - BBC News Afaan Oromoo
Artiist Iteenesh Girmaa: "Kansarii harmaan dhibamtee yaalamaa turte"
12 Waxabajjii 2019
Image copyright OBS
Goodayyaa suuraa Iteenash Girmaa
Sirboota 'Habaabilee'fi kanneen biroon beekamtuu kan taate Artisti Iteenesh Girmaa guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuu waa'elli ishee Artist Yeshii Raggaasaa BBC Afaan Oromootti himteetti.
Erga bara 1987 hiriyaa dhihoo Artist Iteenesh ta'uu kan dubbattu Artist Yeshii, Iteenesh artistii Oromummaa ishiitin boontu turte jetti.
"Iteenesh baayyee nama gaariidhaa, baayyee namaaf yaaddi. Oromummaa ishiitiin baayyee boonti. Oromoon maaliif tuqama, dhimma Oromoo kanarrattis xiiqii guddaa nama qabdu turte. Baayyee namas jaalatti," Jechuun turtii hiriyummaa waliin dabarsan yaadatu Artist Yeshiin.
Aartiistoota Oromoo maaltu akka warra kaanii Finfinneetti bal'inaan hojjachuu daangesse?
Dhibee kansarii harmaatiin dhukkubsachaa jiraachuu waggaa lamaan dura akka itti himtes ni dubbatu.
"Harmashii dhibee kansariitiin dhibamtee hospitaala Xiqur Ambassaatti yaalamaa turte. Dhibeen kuni itti cimee kaleessa gara galgalaa naannoo saatii 11tti boqotte," jetti.
Artist Iteenesh abbaa manaashii Artist Dammaraa Laggasaa waliin ijoollee sadii, dubartii tokkoofi dhiira lama qabaachuus himteetti.
Ilmishii tokko buufata xiyyaaraa keessa akka hojjetus natti himtee turte jedhu.
Artist Iteenesh jaalala namaa guddaa kan qabdu waan turteef battala bara 1987 baandii keessatti walbarree akkamitti hiriyummaa keenya cimsanna jettee nagaafachaa turte.
Kanaafis, gaafan heerumu miinjee naaf taate jechuun imala hiriyummaa qabdu himte Artist Yeshiin.
"Aniifi isheen akka obboleewwanii, akka koodeetti wal ilaalla. Yeroon ani dhibamee ture isheenis dhukkubsachaa waan turteef nu lachuu bakkuma ciisnuu bilbilaanis ta'u walgaafachaa turre," jetti Artist Yeshiin.
Du'a isheetti gaddi guddaan itti dhagahamuufi duuti ishee kun Oromoof gadda guddaadhas jetteeti.
"Ana duwwaa osoo hin ta'iin uummata Oromoo hundaafuu duutishii gadda guddaadha. Barri haaraan sirba isheetiin eegalama.
Waan kana ta'eef ishee dhabuun baayyee nama gaddisiisa," jechuun ibsite Artist Yeshii Raggaasaa.
Viidiyoo ''Durbi dur hin geerartu, kan Ilfee Qannoo raaja''
4 Adooleessa 2018
Imala koo gara Kaaba Keenyaa, Marsabiitiin waanin taajjabe
Lammileen Eertiraa bilisummaa gaafachuuf duula mormiitti jiru
Boombiin Keeniyaatti dhohe poolisoota hedduu galaafate
'Huawei'n bilbila dacha'u gabaaf dhiyeessuf ture tursiise
Hiriira warra dhiiga arjoomaniifi warra dhiiga gurguratanii
Tiraamp waakkiin Iraan fudhatama hin qabu jedhan
Lammiilee Venzuweelaa rakkoo baqatan daangaa Peeruu dhiphisaa jiru
Kara-deemaa waliin haasa'uun maaliif akka gargaaru beektuu?
Dhaabbilee mootummaa gurguddoo gurguruuf yeroon sirrii yoomi?